Xperia XZ3 ga -enwe kamera abụọ dịka mgbapụta ọhụrụ. | Androidsis
The Xperia XZ3 ga-enwe igwefoto abụọ dịka ọhụụ ọhụrụ si dị.
Ụlọ Ignatius | | Sony
Sony bụ onye nrụpụta igwefoto maka ngwaọrụ mkpanaka, mana ugbu a ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta ole na ole na -aga n'ihu na -ahazi sistemụ igwefoto abụọ n'azụ ụdị ya niile, ihe emebeghị. banye n'isi ndị na -eso ụzọ ụlọ ọrụ ahụ na nke ahụ doro anya anaghị eme ka njedebe ya bụrụ nhọrọ maka ndị ọrụ.
Na mgbakwunye, nsogbu ọzọ nke ọdụ ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ Japan, anyị na -ahụ ya na okpokolo agba. Ọ dị ka ọ dị na Sony sSoro usoro ndị nrụpụta hapụrụ ihe karịrị otu afọ gara aga. Ọ dabara nke ọma, ọ dị ka Sony amalitela ịgbaso usoro nke ndị nrụpụta ndị ọzọ edeghị na flagship ọzọ nke ụlọ ọrụ, XZ3 ma ọ bụrụ na ọ ga -enwe igwefoto 2.
Xperia XZ2 kwụsịrị imewe nke ụlọ ọrụ ahụ jiri rụọ ọrụ n'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, bụ omenaala ọdịnala mana nke ahụ o zughị ezu ịbụ nnukwu mgbanwe n'ahịrị. Dabere na onyonyo a gbapụtara, XZ3 ga -etinye sistemụ igwefoto abụọ n'azụ, yana onye na -agụ mkpịsị aka dị n'okpuru ha yana nha nke yiri igwefoto, nke nwere ike bute ọgba aghara. otu onye ọrụ, ọkachasị n'oge ụbọchị mbụ.
Ọ bụrụ na anyị lere anya nke ọma na onyonyo ndị esitekwala n'ihu, anyị ga -ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ dị anabataghị ọkwa ahụ.
Anyị amaghị ihe na -aga site n'isi ụlọ ọrụ mkpanaka nke ụlọ ọrụ Japan ka anyị ghara ịmalite otu ugboro soro usoro ahịa. Ọ dị ka ọnụnọ Sony bụ naanị akụkọ ihe mere eme maka ụlọ ọrụ ahụ yana naanị ego ọ na -enweta site na ire igwefoto ya zuru oke iji mee ka nkewa a na -aga n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » The Xperia XZ3 ga-enwe igwefoto abụọ dịka ọhụụ ọhụrụ si dị.
Ihe ngosi 9 dị na Galaxy ga-akụ ahịa na agba 5